UMicho akangabazi nakancane ukuthi uMulenga uzoyiphakamisa iPirates | isiZulu
OwePirates uthi ujwayele ukushaya ingcwenga yamagoli
ISuperSport United ifake isicelo sokuba uhlehliswe owayo nePirates
USangweni akakafinyeleli ezingeni esilifunayo - Micho
Cape Town - Umqeqeshi we-Orlando Pirates uMilutin 'Micho' Sredojevic ukholelwa ekutheni umgadli odabuka eZambia, u-Augustine Mulenga, angaliphakamisa leli qembu kulandela igoli eliyingcwenga alishaye bedlala neBloemfontein Celtic.
UMulenga ushaye igoli elihle ngoLwesithathu ezakhe ziguqisa ngo-2-1 iCeltic kowe-Absa Premiership, okuyigoli lakhe lokuqala kusukela ejoyine amaSea Robbers, esuka kwiZanaco.
Ekhuluma ngemuva kokunqoba lo mdlalo obeke iPirates ethubeni elihle lokuthatha isicoco se-PSL, njengoba ilandela iMamelodi Sundowns, uMicho uthe: "Ngiyamjabulela kakhulu, uphendule amatafula ngengcwenga yegoli.
"Yiyo into ayizele lapha futhi ngiyazi ukuthi usengenza okukhulu. Ngokuhamba kwesikhathi leli goli lizoletha ukuzethemba kuyena bese eqhulula amanye emidlalweni ezayo.
OLUNYE UDABA: OwePirates uthi ujwayele ukushaya ingcwenga yamagoli
"Unamava awathola ekudlaleni kwiChampions League of Africa [neZanaco], afike nawo lapha. Sesisalelwe yimidlalo emihlanu nje kuphela yesizini, kuhle azizwele sengathi udlala kowamanqamu weChampions League.
"Akayekelwe athokozele lo muzwa, ingcindezi isale ngakithina yokuthi akwazi ukuzibonakalisa ukuthi usendaweni emfanele.
"La badlali abahlanu bokufika baseqophelweni eliphezulu kanti futhi benza umsebenzi oncomekayo."
IPirates, elandela ngemuva ngephuzu elilodwa iMamelodi Sundowns esesicongweni, izobhekana neSuperSport United eLucas Moripe Stadium ngomhlaka-11 Ephreli.
Umgadli we-Orlando Pirates u-Augustine Mulenga uthi igoli lakhe elihle alishaye bedlala neBloemfontein Celtic izolo ebusuku bekungayona inhlanhla.
Usethole umsebenzi omusha kwikilabhu yaseNgilandi owakuleli
Lowo owayengumdlali weBafana Bafana uSteven Pienaar useqokwe njengenxusa lokuqala le-Everton emazweni omhlaba.
Umqeqeshi akeneme ngokuthi bazophinde badlale ekuhambeni koweNedbank Cup
Umqeqeshi weFree State Stars uLuc Eymael ukholelwa ukuthi ikilabhu yakhe ibenebhadi lokuphinde iqhathwe ukuba idlale ekuhambeni kowandulela owamanqamu eNedbank Cup.